यी हुन् विश्वकपको उपाधि जित्ने सम्भावित छ टोली, ब्राजिल र जर्मनी सबैभन्दा बलियो |
१६ जेष्ठ २०७५, बुधबार २५ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार
यी हुन् विश्वकपको उपाधि जित्ने सम्भावित छ टोली, ब्राजिल र जर्मनी सबैभन्दा बलियो
कर्पोरेट नेपाल १६ जेष्ठ २०७५, बुधबार २५ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार
एजेन्सीः रुसमा अबको १५ दिनपछि आयोजना हुने विश्वकप २०१८ को उपाधि कुन राष्ट्रले जित्ला ? विश्वकप आउन १५ दिन बाँकी रहँदा धेरैको ध्यान अहिलेदेखिनै रुस र विश्वकप खेल्ने ३२ राष्ट्रमा गएको छ ।
विश्वभर विश्वकप जित्ने राष्ट्रको अनुमान गर्न थालिइसकेको छ । तर, विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडीहरुको जम्घट र एक सय एक उत्कृष्ट राष्ट्रहरुको सहभागीता हुने भएकाले अहिलेनै विश्वकप जित्ने टोलीको अनुमान लगाउनु छिटो हुन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्य र फुटबलका पण्डितहरुका अनुसार रुसको १६ सहरका १२ रंगशालामा हुने विश्वकप प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने उच्च सम्भावना भएका छ राष्ट्रहरु यसप्रकार छन्ः
विश्वकै सार्वधिक महंगा खेलाडी नेइमारको टोली ब्राजिललाई विश्वकप २०१८ को उपाधि जित्ने उच्च सम्भावना भएको राष्ट्रको सबैभन्दा बलियो मानिएको छ । अहिलेसम्म आयोजना भएका विश्वकपका सबै संस्करणमा सहभागीता जनाउने एक मात्र टोली ब्राजिल हो ।
साथै, ब्राजिलले विश्वकपको उपाधि सार्वधिक ५ पटक उचालिसकेको छ । ब्राजिल युवा तथा विश्वका उत्कृष्ट खेलाडीहरुको साथमा यसपटकको उपाधि जित्दै नयाँ इतिहास रच्ने दाउमा छ ।
ब्राजिल सन् २०१४ मा घरमै भएको विश्वपको सेमफिाइनलमा जमर्नीसँग ७-१ गोलले पराजित हुँदै बाहिरिएको थियो । उत्कृष्ट लयमा रहेको ब्राजिलसँग विश्वकै उत्कृष्ट फरवार्ड नेइमार, ग्याब्रिएल जेसस, फिलिप कौटिन्हो,पाउलिन्होजस्ता खेलाडी छन् ।
यस्तै टोलीमा फर्नानडिन्हो, विलियन, मार्सेलो, थियागो सिल्भा, पेड्रो र फिलिपे लुइसजस्ता विश्वमा नाम चलेका खेलाडी रहनेछन् ।
फुटबलको बादशाह विश्वकपको साविक विजेता हो । जर्मनीले २०१४ मा ब्राजिलमा भएको विश्वकपको उपाधि जितेसँगै हालसम्म ४ पटक विश्वकपको उपाधि उचाललसकेको छ । प्राविधिकरुपमा बलियो मानिएको जर्मनीलाई यसपटकको विश्वपको उपाधि दाबेदारमध्ये सबैभन्दा बलिायो मानिएको छ ।
विश्वकपमा जर्मनीसँग म्यानुयल नोया, जेरोम बोयटाङ, माथियस गिन्टर, जोनास हेक्टर, जुलियन ब्रान्ड्ट, समि खेडिरा, टोनी क्रुस, मेसुट ओजिलज्सता खेलाडी रहेका छन् । यस्तै लेरोय साने, निल्स पेटरसन, मारियो गोमेज, टिमो वेर्नर र थोमस मुलर छन् ।
हालसम्म दुई पटक विश्वकपको उपाधि जितेको अर्जेन्टिना मेस्सीको साथमा विश्वकप जित्ने राष्ट्रको दाबेदार हो । अर्जेन्टिनासँग विश्वका उत्कृष्ट खेलाडी लिओनेल मेस्सी, सर्जियो अगुइरो, डि मारियाजस्ता उच्च सम्भावना भएको खेलाडीले विश्वकप जित्ने टोलीको दाबेदार बनाएका हुन् ।
टोलीसँग मेस्सी, अगुइरो, मारियासँगै पाउल डिबला, गोन्जालो हिगइन, सर्जियो रोमेरो, गाब्रिएल केर्काडो, निकोस ओकामेन्डीजस्तो उत्कृष्ट खेलाडी छन् ।
एक पटक मात्र विश्वकपको उपाधि उचालेको स्पेनलाई पनि विश्वकप २०१८ को उपाधि जित्ने टोलीकोरुपमा हेरिएको छ । हालसम्म १४ पटक विश्वकप खेलेको राष्ट्र स्पेन २०१० मा आयोजना भएको विश्वकपको च्याम्पियन हो ।
पछिल्लो केही समय यता स्पेनको टोली उत्कृष्ट लयमा फुटबल खेलीरहेको छ । युरोपको ठुला पाँच लिगमध्ये एक स्पेनको ला लिगा फुटबलको प्राविधिक पक्षले स्पेनलाई उपाधिको दाबेदारकोरुपमा प्रस्तुत गरेको हो ।
विश्वकपमा स्पेनसँग डेभिड दि गिया, सर्जियो रामोस, ड्यानी कार्जाभाल, जेरार्ड पिके, डेभिड सिल्भा, आन्दे्रस इनिएस्टाजस्ता खेलाडी छन् । यस्तै डिएगो कोष्टा, रोड्रिगो मोरिनो इयोगो पनि स्पेनको साथमा रहनेछन् ।
एक पटक मात्र विश्वकप जितेको फ्रान्सले सधै दमदार प्रदर्शन गर्दै आएको छ । हालसम्म १४ पटक विश्वकपमा सहभागीता जनाएको फ्रान्सले ५ पटक सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको छ ।
यस्तै दुई पटक फाइनल पनि खेलेको फ्रान्सले विश्वकप २०१८ जित्ने सम्भावना उच्च रहेको छ । यस्तै फिफाले सार्वजनिक गरेको विश्वकपको उपाधि जित्ने सम्भावित राष्ट्रमा पनि फ्रान्सलाई लिइएको छ ।
फ्रान्ससँग हाल विश्वकप खेल्ने टोलीमध्य सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडीको सम्मिश्रण छ । साथै? पछिल्लो समयमा फ्रान्स विश्व फुटबलको उत्कृष्ट लयमा हिँडिरहेको छ । उसले विश्वकपमा प्रस्तुत गर्ने सबैभन्दा बलियो पक्ष डिफेन्स र मिडफिल्ड हो भने अग्रपंत्ति पनि बलियो रहेको छ ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डोको टोली पोर्चुगल आउँदो विश्वकपको उपाधि जित्ने सम्भावना भएको राष्ट्र हो । पोर्चुगलले अहिलेसम्म छ पटक विश्वकपमा सहभागीता जनाएको छ । पोर्चुगलले दुई पटक युरो कप फुटबलको उपाधि पनि उचालिसकेको छ ।
पोर्चुगलमा रोनाल्डोका साथै नानी, पेपे र रिकार्डो क्वारिस्मा जस्तो विश्वस्तरीय खेलाडीको उपस्थिति रहेको छ ।
विश्वकप फ्रान्सले जित्ने फिफाको अनुमान, ब्राजिल क्वाटरफाइनलबाट बाहिरिने
विश्वकपका लागि नेइमारको नेतृत्वमा ब्राजिलले छान्यो २३ खेलाडी
रोनाल्डिनोले लिए फुटबलबाट सदाका लागि सन्यास
अबको सपना विश्वकपको उपाधीः मेस्सी, नजिते फुटबलबाट सन्यास
विश्वकप फुटबलका लागि अर्जेन्टिनाको २३ सदस्यीय खेलाडी घोषणा
रुस विश्वकपका लागि जमर्नीले छान्यो २७ खेलाडी